Sare & Cunto; Siyaabaha Loo Higayo Xogtaada Taageerida Taariikhda Goolasha
Google ayaa cusbooneysiiyay adeegsigeeda ku saabsan muhiimadda dhabarka ee bilaha, laakiin waxaan ka warqabnaa xaqiiqda ah in backlinks ay tahay furaha guusha mashiinka raadinta . Waxay ka caawiyaan Google, Bing, iyo Yahoo inay go'aamiyaan muhiimada bogagga iyo blogyada. Dad badan ayaa ka doodaya in ay isticmaalaan dib u qaabeyn dhab ah oo firfircoon si ay u galaan dadka soo booqanaya ama aan ahayn, waana run in dhabarka uu xaqiijin karo tareenada webka tayada leh. Waxaa intaa dheer, waxay kaa caawinayaan inaad la socotid oo aad sare u qaaddo xiriirrada hadda jira ee goobtaada.
Aan dhawrno qodobo dhowr ah si aan u fahanno sababta ay muhiim u tahay in lagu daro xogta gadaasha iyo macluumaadka raadinta. Taasi waxay naga caawin doontaa inaan fahanno sida loo wanaajiyo darajooyinka raadiyaha raadinta ee boggayaga internetka iyo nooca ficilada loo qaado si kor loogu qaado qiimaha internetka - la planification de la main.
Halkan Igor Gamanenko, oo ah xirfadle sare oo ka socda Semt , ayaa kaala hadli doona siyaabaha lagula xiri karo astaanta dhabarkaaga ee xogta raadinta
1. Bogagga Jajabyada leh Backlinks
Iyadoo boggaga jaban iyo warbixinnada backlink, waxaad si sahlan u heli kartaa bogagga qalad u leh dhabarkooda dibna ugu laabo qaladaadka 4xx iyo 5xx. Haddii aad rabto inaad ka fogaato arinkan, waa inaad jebisaa dhabarkaaga qaybo kala duwan. Haddii kale, waxaad boggaga ku soo celin kartaa 200 xaaladood ama waxaad cusbooneysiisaa xaaladdooda 301. Hab kale oo kale waa inaad u diri kartaa bogag kale ama waxtar leh oo kale.
2. Bogagga aan dibedda lahayn ee leh Backlinks
3. Dib u dirista URLsyada leh Backlinks
Websaydhadu waxay baddalaan nidaamyadooda iyo mararka waqti, waxaana suurtagal ah inaad bedesho URLkaaga iyo dhismihiisa sida ay u socdaan isbedelka hadda. Haddii ay muujinayso qalad 301, waa inaadan u oggolaan makiinadaha raadinta raadinta boggaaga ilaa inta qaladkan la tirtiro. Waa run in gadaal dambe ee bogga dib loo soo celiyo ma aha arrin muhiim ah, laakiin waad dib u eegi kartaa oo aad bedeli kartaa goobaheeda si aad u beegsato dhagaystayaasha muhiimka ah. U hubso inaad isticmaashay qoraalka qoraalka ah si loo kordhiyo fursadahaaga aad ku fiicnaan lahayd natiijooyinka raadinta raadinta
4. Agagaarka Waayeelka leh Backlinks
Boggaga agoonta ah ayaa wadi kara boggaaga badan ee baabuurta, laakiin webmasters badanaa waxay illoobaan, iyaga oo booqdayaashooda khibrad xumo ka helaya goobta. Waa inaad dib u eegtaa boggaga agoonta ah adigoo midba midka kale dib u eegaya, inaad hubiso in dhamaan boggaga ay qiimo u leeyihiin dhagaystayaashaada.
5. Diido URL oo leh Backlinks
Dhamaan URL-yada aan la raacin oo leh dib-u-xajmeedyo muujinaya bogagga lagu sheegay faylka robots.txt. Bogagga leh arrintan waxay sababi kartaa dhibaatooyinka martida, hoos u dhigida lambarkooda ilaa xad. Waa inaad u oggolaataa in boggaga la gooyo adoo ka soo saaraya faylka robots.txt.
6. Meta Nofollow Page with Backlinks
Warbixinta Meta Nofollow oo leh Backlink, waxaad qeexi kartaa bogagga leh iyo adigoon lahayn taga oo tilmaam qaladaad iyaga ku jirta. Waad ku xalin kartaa dhibaatada adoo ka saara qoraalada aan loo baahnayn ee shabakadaada. Ka feker sidii loo dhisi lahaa plugin ku haboon si loo hagaajiyo waxtarka guud iyo fiirinta goobtaada.